योनी सुक्खा हुने समस्याबाट चिन्तित हुनुहुन्छ ? यस्तो छ ठिक पार्ने उपाय - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com योनी सुक्खा हुने समस्याबाट चिन्तित हुनुहुन्छ ? यस्तो छ ठिक पार्ने उपाय - खबर प्रवाह
महिलाहरूमा योनी सुखा हुने एउटा सामान्य कुरा हो । यद्यपि यो यौन सम्पर्कको समयमा भने कुनै पनि महिलाको लागि निराशाको विषय हो। साथै, यदि तपाईं यस्तो अवस्थामा सेक्स गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले धेरै पीडा महसुस गर्नुपर्नेछ।
तपाईंको योनी सुक्खा हुने समस्याबाट गुज्रँदै हुनुहुन्छ भने तपाइँले त्यस्ता फलहरू लिनुपर्दछ जसले तपाईको शरीरलाई बढी पानी दिन्छ।